R/Wasaare Abiy Ahmed oo maanta ku dhawaaqday go'aan siyaasadeed culus - Caasimada Online
Home Warar R/Wasaare Abiy Ahmed oo maanta ku dhawaaqday go’aan siyaasadeed culus
R/Wasaare Abiy Ahmed oo maanta ku dhawaaqday go’aan siyaasadeed culus
Muqdisho (Caasimada Online) – Xukuumada dalka Ethiopia ayaa ku dhawaaqday go’aan dib loogu qaaday Xaalada degdega ah ee saran dalka Ethiopia, kadib markii maanta oo sabti ah ay go’aankaasi ansixiyeen Wasiirada.
Xukuumada ayaa shaacisay in dib loo qaaday xaalada degdega ah ee saarneyd Ethiopia tan iyo bishii Febraayo ee sannadkaan.
Xukuumadu waxa ay tilmaantay in Bandowgaasi uu ka dhashay rabshado dhaliyay dhimasho badan oo saameeyay Gobolo badan oo dalkaasi ah sida Gobolka Oromada.
Rabshadaha ayaa looga soo horjeeday Xukuumadii uu hoggaaminaayay Helimaryan Desalin oo dhawaan iska casilay xilka uu hayay, kadib markii ay sii xoogeysteen rabshadaha.
Fitsuma Arega oo ah Madaxa xafiiska Ra’isul wasaaraha Ethiopia, ayaa warbaahinta la wadaagay in Golaha Wasiirada ay dib u eegeen xaaladda amni ee Ethiopia, kadibna ay isku raaceen in dib loo soo celiyay amnigi iyo kala danbeynti hore.
Si kastaba ha ahaatee, go’aankaan ay Xukuumada Abiy Ahmed ku dooneyso in lagu qaado xaalada degdega ah ee saran Ethiopia ayaa fursad u noqon doonta Ganacsato iyo Shacab farabadan oo uu saameeyay amarka.